IRoyal Caribbean izisa iinqanawa ezintsha zaseJamaica ngo-Novemba ka-2021
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » IRoyal Caribbean izisa iinqanawa ezintsha zaseJamaica ngo-Novemba ka-2021
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, u-Edmund Bartlett, (2R) uthatha umzuzu kunye neRoyal Caribbean International's -Sekela Mongameli wemiCimbi yezoShishino, uDonna Hrinak (2nd L); Usekela-Mongameli we-Operational Port Operations, uHernan Zini (L) kunye no-Sekela Mongameli wezoBudlelwane bakaRhulumente, uRussell Benford, eMiami, eFlorida kule veki.
IRoyal Caribbean International, indawo yesibini ehamba ngenqanawa emhlabeni, ngokusebenzisa iqela labo lobunkokeli lazisa uMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica, u-Hon. U-Edmund Bartlett, eMiami, eFlorida, kule veki bazokuphinda baqale ukusebenza eJamaica ngoNovemba walo nyaka.
Umgaqo wokuhamba ngenqanawa eRoyal Caribbean uzimisele ukuqesha amawaka abantu baseJamaica.
Inkampani yokuhamba ngeenqanawa iya kuba kwindawo yokunyusa kakhulu uhambo oluya eJamaica, izisa amashumi amawaka abakhenkethi abagonywe ngokupheleleyo.
Ukuzalisekiswa kwezilungiso kulawulo lukarhulumente yinto efunekayo ngokulandelayo ukwenza konke oku kube yinyani.
Abaphathi abaphezulu bongeze ukuba emva kokuba izinto ezininzi zokwenza izinto - ezinye zazo zingaphandle kwesicelo sikaJamaica - zisonjululwe ngokufanelekileyo baya kuba kwimeko yokunyusa kakhulu uhambo oluya Jameyikha, ukuzisa amashumi amawaka abakhenkethi abagonywe ngokupheleleyo. Abaphathi abaPhezulu baphinde bawuphinda umnqweno wabo wokuqesha amawaka abantu baseJamaica kuluhlu olubanzi lwemisebenzi kwaye balindele izilungiso zolawulo zikarhulumente ukuyenza inyani.
Eziphendulela uMphathiswa uBartlett uvakalise ukonwaba kwakhe esithi “iRoyal Caribbean izakucebisa ngolwandle ukuya eJamaica emva kwesithuba esingaphezulu konyaka nesiqingatha ngenxa yobhubhane we-COVID-19. Sinezinto ezimbalwa ezixineneyo ekufuneka sizisombulule kwangoko ukuze zikhule uhambo oluya eJamaica kwaye ngokubuyisela ukonyusa indlela yokuphila yezoqoqosho nentlalo yamawaka amaJamaica axhomekeke ngokuthe ngqo nangokungathanga ngqo kushishino lokuhamba ngenqanawa. Ngaphandle koko urhulumente uza kuhamba ngokukhawuleza ekuququzeleleni iinzame zomgaqo wokuhamba ngenqwelomoya wokuqesha amawaka abantu baseJamaica, ukuba ngawaphi amathuba emisebenzi anomdla ngokwenene aya kuba nefuthe elihle kwabaninzi. Abantu bethu bakwimfuno kwaye iinqanawa zolwandle ziyakuqonda oku. ”
UMphathiswa wezoKhenketho eJamaica, u-Edmund Bartlett, (3 R) uthatha umzuzu kunye no-Sekela Mongameli weRoyal Caribbean International yezeMicimbi yezeNkampani, uDonna Hrinak (4 R) kunye no-L-R, uMcebisi oPhezulu wezoKhenketho kunye neQhinga, uDelano Seiveright; IBhodi yabaKhenkethi baseJamaica (JTB) uSekela Mlawuli kwiMelika, uDonnie Dawson; Usihlalo we-JTB, uJohn Lynch; Usekela-Mongameli weRoyal Caribbean International kwi-World Operations Port, uHernan Zini; UMlawuli wezoKhenketho, u-Donovan White kunye no-Sekela Mongameli weRoyal Caribbean kubuRhulumente, uRussell Benford.
Olu phuhliso luza emva kwenye intlanganiso ekhokelwa ngu-Mphathiswa u-Bartlett kunye neqela lakhe neGosa eliyiNtloko lesiGqeba se-Carnival Corporation, eyona nkampani inkulu ehlabathini, u-Arnold Donald kunye nabanye abaphathi beenkampani eziphezulu e-Miami apho bazise ngezicwangciso ze-110 okanye nangaphezulu ngaphezulu kwama-200,000 abatyeleli abagonywe ngokupheleleyo eJamaica kwezi nyanga zimbalwa zizayo. Ujoliso luxhomekeke kwintsebenziswano esondeleyo phakathi kwabasemagunyeni baseJamaican kunye neCarnival kulungiselelo lwezinto.
UBartlett wajoyina uSihlalo weBhodi yabakhenkethi yaseJamaica, uJohn Lynch; UMlawuli wezoKhenketho, uDonovan White; IQhinga eliPhezulu kwiCandelo loMphathiswa Wezokhenketho, uDelano Seiveright kunye noSekela Mlawuli wezoKhenketho kumazwe aseMelika, uDonnie Dawson. I-Royal Caribbean International ukuzibandakanya yenye yoluhlu lweentlanganiso kunye neenkokheli zeshishini lokuhamba, kubandakanya ii-Airlines ezinkulu kunye nabatyali mali, kwiimarike ezinkulu zaseJamaica, eUnited States naseCanada. Oku kwenzelwa ukuqhubela phambili ukwanda kwabantu abafikayo kwezi veki neenyanga zizayo, kunye nokuqinisa utyalo-mali kwicandelo lokhenketho lwasekhaya.
Umzi mveliso weenqanawa wokuhamba ngenqanawa wawuphakathi kwezona zinto zichaphazeleke kakhulu sisibetho se-COVID-19, sivale ishishini ixesha elingaphezulu konyaka. Nangona kunjalo, ngezona nkqubo zomeleleyo zempilo kunye nezokhuseleko kushishino lokuhamba lwehlabathi, kubandakanya abagibeli abagonywe ngokupheleleyo kunye nabasebenzi, eli shishini liye laqalisa kwakhona ukusebenza kwiindawo ezininzi kubandakanya iJamaica.